Ogaden News Agency (ONA) – 3 Kamid Ah Sirdoonka Wayaanaha oo Faldambiyeed Lagu Qabtay.
3 Kamid Ah Sirdoonka Wayaanaha oo Faldambiyeed Lagu Qabtay.
Posted by Dulmane	/ January 4, 2018
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Ambo ee Gobolka Shawa ee deegaanka Oromada ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay 3 askari oo katirsan ciidanka sirdoonka wayaanaha oo falal amaandaro ah kawaday magaalada.
Sida xogta aan kuhelayno ciidanka Booliiska magaalada Ambo iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa gacanta kusoo dhigay 3 askari oo udhashay qoomiyada Tigreega kuwaas oo sida lasheegay katirsan ciidamada sirdoonka wayaanaha isla markaana aan deegaankan kahowl gali jirin.
Afhayeen u hadlay maamulka magaalada Ambo oo warbaahinta maxaliga ah la hadlay ayaa sheegay in ay askartan sooqabteen iyagoo kulabisan dirayska Booliiska deegaanka isla markaana faraha kula jira falal amni xumo ah, afhayeenka ayaa intaas kudaray in ay raganu gaysteen dhac iyo kufsi baahsan oo ay kula kaceen dadka deegaanka.
Nimankan katirsan ciidanka sirdoonka wayaanaha ee xidhan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Goitom Berhe, Gebrekidan Hadush iyo Haile Fessha. Waxaana lasheegayaa in ay udhasheen qoomiyada Tigreega isla markaana ay wada shaqayn dhaw lalahaayeen ninka sirdoonka madaxda ka ah ee Getache Asafa.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in saraakiishan sirdoonka katirsan ee laqabtay loosoo diray shaqada lagu qabtay oo ah in ay iska horkeenaan Booliiska deegaanka iyo dadka shacabka ah, waxaana lasheegayaa in ay shaqadoodu ahayd in ay Booliiska magaca kadilaan.
Talaabooyinka noocan ah ayaa tilmaan u ah burburka xukuumada wayaanaha, waxaana sanadihii lasoo dhaafay gudaha Itoobiya kasocda nidaam la’aan iyo isbarbaryaac aad uwayn.